[YEPAMUTEMO] dr.fone Toolkit - Android Data Extraction: kupora Data kubva Broken Android
dr.fone Toolkit - Android Data Extraction (Damaged mudziyo)
Wenyika 1st Data kudzosa Software nokuda kuputswa Android mano.
Highest kudzosa mwero iri indasitiri.
Kupora mifananidzo, mavhidhiyo, neshamwari, mashoko, kudanwa matanda, uye zvakawanda.
Kunoenderana Samsung Galaxy namano.
Tinogona kupinda kwako zvakakuvadza mudziyo uye kuwana mafaira ako shure.
Kupora Data kubva Broken Android ezvinhu akasiyana-siyana
Various mamiriro ezvinhu vanotsigirwa, kufanana netsaona zvakakanganisa Chifukidziro Android mudziyo wako, chidzitiro kwete rinova dema uye anoratidza chinhu, haagoni kupinda marongedzero asingazivikanwi zvikonzero, asingakwanisi kuvhura USB debug, kukanganwa zvechizarira chinovhara pasiwedhi, Achipindura pamwe akagunzva chidzitiro uye zvakawanda.
Tarisei uye Preview for Free
Unogona kuzvisarudzira kutongwa shanduro iyi yakaputsika Android date kupora Software kuti atarise uye pfupiso Data pamusoro mudziyo wako, kuti iwe unogona kusarudza chinhu kuti apore.
Pakurwara SD Card pamusoro Android
Kwete chete dzomunyika ndangariro kadhi, ichi wakaputsika Android date kupora Software kunobatsirawo kuti atarise uye kupora mashoko enyu SD kadhi iri wakaputsika mudziyo.
Recoverable Files kubva yakaputsika Android namano
Unogona Export dzenyu neshamwari vari CSV, HTML uye VCF zvinogona kuti kombiyuta, nyore kushandiswa pave paya. Uye kuponesa mashoko enyu kuputswa Android mudziyo muna HTML pamanyorerwo kuti kombiyuta kuti kuverenga nyore kana kudhindwa. For mapikicha, mavhidhiyo, makaseti uye dzimwe mhando magwaro, unogona kuponesa pose pakombiyuta yako, chero unogona kudziwana nyore.
Shanda Zvikuru pamwe Android namano
Pari, Android mashoko kupora Chirongwa wakaputsika ichi inoshanda zvakakwana mijenya pamusoro Samsung dzeserura uye mahwendefa, dzakadai Galaxy S series, kuti Galaxy Note series, etc. Kana mamwe mavanga Android mano, usanetseka. Richauya nokukurumidza zvikuru munguva yemberi iri pedyo.
Android chirongwa ichi date kupora wakaputsika kuverengwa-chete zvachose software. harizovi kuchengeta, kuchinja kana achigarira maoko chero mashoko ari mudziyo wako kana ari ndipo pachinobatsirawo faira. Tinotora zvako pachako mashoko uye nhoroondo zvakakomba. nguva dzose uri munhu chete anogona kuwana nayo.
Complete Android kugarisana
Cherechedza 3, ona 4, ona 4 Edge, ona 5, ona 5 DUOS, ona 8, Note II
Vaone pamazita akatsigira mano >>
Android 5.0 uye vaimbova
Dzosa Files From ...
Tarisei mudziyo wako kuwanazve mashoko
Tarisei kwenyu ndangariro kadhi kuwanazve mashoko
Dzokununura mafaira enyu kuputswa Android.
Kupora kwako akarasika mashoko ane rugare rwepfungwa.
Kupora chero chinhu uchida pamusoro mudziyo
No kukuvadza nemashoko enyu pamusoro mudziyo zvachose
Verenga-chete, hapana mashoko akaramba kana leaked
Nzwisisa inowanikwa vose kushandisa
Edza software pachena kwemazuva 30
Android Data Extraction (Damaged mudziyo)
Mirror, girazi pamadziro, ndiani akanakisisa gamba munyika?
Ehe! Wondershare Dr. Fone iri! Upenyu hwangu (mumifananidzo)! Ini handigoni kukutendai zvakakwana pakuumba purogiramu kukuru kwakadaro!
Excellent Android kupora Software
Ndakatenga ichi saka I apore zvose pamusoro Amai vangu Samsung Galaxy Phone shure format.
I netsaona dzadzimwa mifananidzo ndakatora kubva Samsung S3 usiku rangu rokupedzisira uye ndakanga agumbuka nokuti mifananidzo vaiva mwanasikana wangu wokutanga rokwe \_ 's muchato edza mberi. Ndakanyengetera kuti izvi zvaizoitika kushanda uye vakaita !! Zvakatitorera nguva refu asi ndinoda kuzviita zvose pamusoro zvakare uye ndinoda kukuudza chigadzirwa ichi kuti munhu !! Ndinokutendai zvakare. Ndiri mai vanofara chaizvo romwenga.
How wokugadzirisa Contacts kubva Android Phone pamwe Broken Screen
2 Nzira Tsvaka Android Phone pamwe Broken Screen
How kuwanazve Text Mashoko kubva Broken Android namano
How dzokuzarura Android Phone ine Broken Screen
Sei negadziriro yeparutivi Android Phone pamwe Broken Screen
How kuwanazve Text Message kubva Broken Samsung namano
Sei Isa Bricked Android Phones uye Tablets
Sei Isa Samsung Galaxy Black Screen
Sei Isa Samsung Galaxy Sudden Death: Black Screen Rufu
Kupora dzadzimwa kana varasikirwa mashoko kubva 6000+ Android namano.
Bvisa rakakiyiwa chidzitiro kubva Android mano pasina kurasikirwa mashoko.
Zvokusarudza negadziriro yeparutivi dzenyu Android mashoko pakombiyuta uye kuidzosera maererano nezvaunoda.